အခြားသူများကစက်ရုံ, ပေးသွင်း | တရုတ်အခြားသူများထုတ်လုပ်သူများ
ဗီတာမင် E ကို
သဘာဝ Beta ကိုကာရိုတင်း 96%
သဘာဝခရမ်းချဉ်သီး Beadlet 10% CWS-B က Beadlet, အအေး Wat ...
ဗီတာမင်အီး 98% ဆီ, DL-alpha Tocopherol ရေနံ
ဗီတာမင် A Palmitate 1.0 M က IU သည်
【 CAS အမှတ်】:87-99-0
【 HS Code ကို】:29054910
【 CAS အမှတ်】:24634-61-5
【 HS Code ကို】:29161910
【လျှောက်လွှာ】Maltodextrin is used asafood thickener, the application such as in oatmeal, sauces, confection, and salad dressings, soft drink and candy. Maltodextrin isapolysaccharide that is used asafood additive.
【အမျိုးအစား 】 DE 10-12/15-20/8-10
【 HS Code ကို】:29211990
Deep knowledge on Taurine i market enable us source you with competitive price ex reputable Taurine i manufacturers. If you are looking for Taurine , ကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးမှတှနျ့ဆုတျပါဘူး။
【လျှောက်လွှာ】Food production, cosmetic, pharmaceutical
【 CAS အမှတ်】9067-32-7
【လျှောက်လွှာ】As one of most important organic raw materials, it is mainly used in such products as Vinyl acetate, acetic anhydride, diketene, acetate.
【လျှောက်လွှာ】Soya Fiber is made from the cell wall fiber and protein of the soybean cotyledon，widely used in any application where water absorption and binding are needed, such as ketchup，light breads, rolls, machine breads, frozen doughs, refrigerated doughs, cakes and sweet goods.
【အမျိုးအစား 】 Powder
Glutathione လျှော့ချ Powder
【လျှောက်လွှာ】Glutathione (GSH) (က glycine မှပုံမှန် peptide ချိတ်ဆက်နေဖြင့်ပူးတွဲပါသော) cysteine ၏ Amin အုပ်စုနဲ့အချိုမှုဘေးထွက်ကွင်းဆက်၏ carboxyl အုပ်စုတစ်စုအကြားတစ်ဦးပုံမှန်မဟုတ်သော peptide ချိတ်ဆက်ပါရှိသည်တဲ့ tripeptide ဖြစ်ပါတယ်။
【လျှောက်လွှာ】Polyethylene glycol (PEG) isapolyether compound with many applications, from industrial manufacturing to medicine.
【လျှောက်လွှာ】Mannitol အကြီးအကျယ်အစိုဓာတ်ကို content တွေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ထုတ်ကုန်များအများအပြားအမျိုးအစားများအတွက် humectant အဖြစ်အသုံးပြုသည်နှင့် confectionery, မီးဖုတ်ထားသောကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ချောကလက်၏ထုတ်လုပ်မှုအတွက်အသုံးပြုသည်။
【 CAS အမှတ်】:50-70-4
【 E ကိုအမှတ်】: E420
【 HS Code ကို】:2905 4400
【 HS Code ကို】:21061000
Deep knowledge on Hemp Protein market enable us source you with competitive price ex reputable Hemp Protein manufacturers. If you are looking for Hemp Protein, ကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးမှတှနျ့ဆုတျပါဘူး။
【လျှောက်လွှာ】Sorbitol ဂလူးကို့စကနေဖန်ဆင်းတော်နှင့်ကျယ်ပြန့်သီးသောအသီးအနှံအကောင်းဆုံးတှငျတှေ့နှင့်၎င်း၏အကြောင်းအရာ 2% လောက် 1% ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာဘီလီယံဒေါ်လာလျော့ချမယ်အဖြစ်အသုံးပြုများနှင့်ဂလူးကို့စမှနှိုင်းယှဉ်ဖြစ်ပါတယ်။
【အမျိုးအစား 】 အရည်
【လျှောက်လွှာ】Soy lecithin can be applicated in Nutritional products, Food supplement, Cosmetic, Pharma
【 CAS အမှတ်】:8002-43-5
【 HS Code ကို】:29232000
ROOM တွင် 4169Bengbu လမ်း, Qingdao, 266044, PR စနစ်တရုတ်
E-mail ကို: sales@toptionind.cn; info@kanegrade.cn
ဖုန်းနံပါတ်: +86 532 84673486; +86 18953265131 (WeChat)
ဖက်စ်: +86 532-85621129
Skype ကို: toptionind